सत्ता गठबन्धनको बैठकलगत्तै प्रधानन्यायाधीशको निवासमा किन गए प्रचण्ड ? – Nepal Press
२०७८ मंसिर १२ गते
२०७८ कार्तिक ४ गते ९:१६
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधवार साँझ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग एक्लै भेटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रचण्ड त्यही कम्पाउण्डमै रहेको प्रधान न्यायाधीशको निवासमा छिरेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसअघि बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु शेरवहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल,डा‍. बाबुराम भट्टराईलगायतको छलफल चलेको थियो । शीर्ष नेताको छलफलपछि प्रचण्ड एक्लै प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गएको बताइएको छ ।
सत्तामा भागबण्डा खोजेको आरोप राणामाथि उनीहरुले लगाएका छन् । तर असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशले राणाविरुद्ध सत्तानिकट वकिलहरु प्रयोग गरेको आरोप छ । भागबण्डामा हिस्सेदारी भने उनीहरुले समेत पाउने समझदारी बनेको यसअघि नै खुलिसकेको छ ।
अदालतमा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम गाँसिएको मुद्दाको फैसलाको मितिसमेत कात्तिक १५ लाई तोकिएको छ । सो मुद्दा राणा आफैंले हेरेका छन् ।
आजबाट १५ दिन लामो विदापछि अदालत खुल्दैछ । अदालतमा राणालाई छिर्न नदिने अभिव्यक्तिसमेत सत्तानिकट वकिलहरुले दिएका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ कार्तिक ४ गते ९:१६
अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय सदस्यको सूची बन्दसत्रबाट अनुमोदन
मध्यरातमा एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु, ओलीले केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्दै
एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी मनोनयन लगायतका बाँकी प्रक्रिया बिहानसम्म स्थगित
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लम्की चुहा नगर कमिटीको सचिवमा भुल विजयी
एमाले अध्यक्षमण्डलको बैठक जारी, ओलीद्वारा प्रस्तावित सूचीमाथि छलफल हुँदै (तस्बिरहरु)
बन्दसत्र हलबाट भीम रावल बाहिरिए
रामचन्द्रको गृहजिल्लामा देउवाको सफलता, सभापतिमा जितप्रकाश निर्वाचित
अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको सूचीप्रती भीम रावलको आपत्ति
एमाले अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा केशव बडाल
एमाले महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका संशाेधन, मतदानकाे समय भाेली राति ९ बजेदेखि पर्सी बिहान ३ बजेसम्म
वागमतीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म- यी हुन भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य (सूचीसहित)
ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय मिडियामा चर्चा !
ओलीलाई अधिकार प्रत्यायोजनपछि के भन्छन् नेताहरू ?
ईश्वर-विष्णु सहकार्यले ओलीलाई सहज, महासचिवमा सहमति गर्न पौडेल र पोखरेलबीच वार्ता हुँदै
एमाले केन्द्रीय सदस्य यादव महाधिवेशनस्थलमा बेहोस